Accueil > Gazetin'ny nosy > Vatican: Eveka malagasy 3 noraisin’ny Papa François
Vatican: Eveka malagasy 3 noraisin’ny Papa François
Efa akaiky ve ny fanendrena kardinaly ho an’i Madagasikara? Fanontaniana mipetraka io tao aorian’ny fihaonana manokana teo amin’ny Papa François sy ireo eveka malagasy 3 mirahalahy, tao Vatican any Roma, ny zoma 2 febroary lasa teo. Raha ny fantatra dia ny Mgr. Désiré Tsarahazana, aresevekan’i Toamasina sady filohan’ny fiombonamben’ny Eveka eto Madagasikara (CEM), ny Mgr. Marie Fabien Raharilamboniaina, evekan’i Morondava, filoha lefitra ny CEM, ary ny Mgr. Jean Claude Randrianarisoa, evekan’i Miarinarivo, sekretera jeneralin’ny CEM, no noraisin’ny Papa Ray Masina tamin’io fotoana io. Tsy mbola fantatra moa ny tena votoatin-dresaka nifanovan’ny andaniny sy ny ankilany satria mbola hisy ny fampitam-baovao hataon’ireto eveka malagasy ireto rehefa tafaverina eto an-tanindrazana izy ireo.
Betsileo: Tsy noraharahian’ny fanjakana intsony
Tamin’ny asabotsy faha 03 febroary 2018 lasa teo no natao ny fifampiarahabana noho ny fahatongavan’ny taona vaovao ho an’ny firaisan-kinan’ny faritanin’i Fianarantsoa. Teny amin’ny hôtelin’i Claudine Razaimamonjy no nanatanterahana izany. Vory marobe ny olona avy any amin’ity faritany ity izay nahitana ny Betsileo izay tompon’ny fihetsiketsehana, ny Bara, ny avy any Vatovavy Fitovinany izay misy ny Antambahoaka sy ny Antemoro ary ny Tanala. Hatrany Vaingaindrano izay misy ny Antesaka no tonga teny amin’ny fihaonana. Ny fampandrosoana ny faritanin’i Fianarantsoa no lohahevitra tamin’ny kabary izay nifanaovan’ny mpandray fitenenana rehetra.
Raha ny taratasy fanasana tamin’ity fety ity no asian-teny dia nasaina avokoa ny minisitra rehetra avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa toa an-dry Andriamosarisoa Jean Anicet izay minisitra ny Fanatanjahan-tena, Rasoazananera Marie Monique izay minisitra ny Fampianarana Ambony sy ny fikarohana siantifika, Rakotomamonjy André Neypatraiky minisitra ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao, Beboarimisa Ralava minisitra ny Fitaterana, Armand Tazafy minisitra ny Indostria, ary ramatoa Toto Raharimalala Marie Lydia izay minisitra ny Fampianarana teknika. Nahagaga anefa fa samy tsy nisy tonga tao izy ireo. Ny fahenoana azy ireo dia lasa nandositra namonjy ny faritany avokoa tamin’ny asabotsy 03 febroary 2018 na namotoka tao an-tranony. Mafy loatra hono no baiko tsy hahazoana hamonjy ity fihaonana ity ka dia nanao sambo milentika izao izy ireo.
Tsy nahitana senatera sy depiote firy avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa koa iny fihaonana iny. Senatera 10 be izao izy ireo no nanasa ny vahoakany ho tonga tamin’izany, ary depiote 27 no nipingampinga hamory vahoaka eto Antananarivo avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa io. Senatera 3 ihany no tonga dia Ratongavelonanahary Modeste, Mananjara Andriambololona, Riana Andriamandavy VII izay mpikarakara ny hetsika. Nanampy azy ireo ny senatera 2 izay tonga hitsikilo ny mpanatrika tao izay voalazan’ny mahalala fa iraka ny fitondram-panjakana hono. Ingahy Benja Urbain avy any Manakara ihany no depiote mba tonga tamin’izany.
Mandeha dia mandeha ny resaka amin’izao fotoana izao fa tsy navela hanatrika ity fihaonana ity hono ireo minisitra sy senatera ireo. Izany dia noho ny antony pôlitika ka najanona tamin’ny ora farany. Voalazan’ny loharanom-baovao fa ny fitondram-panjakana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina mihitsy no nanakana ny tsy hahatongavan’ireto minisitra nasaina ireto. Gaga dia gaga tokoa ny olona nasaina izay nahatratra teo amin’ny 2000 teo ho eo. Mbola ady hevitra any amin’ny olona avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa iny fahabangana iny. Samy nanambara avokoa izay olona nifanena taminay omaly fa tsy noraharahian’ny fanjakana intsony ny Betsileo sy ny avy any Fianarantsoa ka tokony handini-tena amin’izay. Nahatsiaro tena ho kamboty izy ireo tamin’iny fihaonana tsy nisy raiamandreny tao amin’ny fitondrana iny.
Fihetsika natao hanalam-baraka ny Betsileo no nandraisan’ny maro iny raharaha iny. Nefa hoy izy ireo hoe “aleo halan’andriana toa izay halam-bahoaka” satria maro ihany ny Betsileo nahatsapa fa mbola mipetraka ihany ny fifankatiavan’ny olon-tsotra.
Nanomboka ny taona 2000 dia ny Betsileo sy ny mponina tany amin’ny faritanin’i Fianarantsoa no natao fitaovana pôlitika hahazoana fanjakana. Ravalomanana nampiasa an’i Pety Rakotoniaina, Andry Nirina Rajoelina nampiasa ny tao Ambositra ary Hery Rajaonarimampianina nampiasa an’i Claudine Razaimamonjy.